Kufamba uye kuda kufema mweya mutsva? Kwokusaenda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahrain Kuputsa Nhau » Kufamba uye kuda kufema mweya mutsva? Kwokusaenda
Bahrain Kuputsa Nhau • Bangladesh Kuputsa Nhau • Bhutan Breaking Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Cameroon Breaking News • China Kuputsa Nhau • Egypt Kudzokorora Nhau • India Kupwanya Nhau • Iraq Kuputsa Nhau • Kiribati Breaking News • Kuwait Kuputsa Nhau • Libya Kupwanya Nhau • Mauritania Breaking News • Myanmar Breaking Nhau • Nepal Kuputsa Nhau • New Zealand Kupwanya Nhau • Niger Breaking Nhau • Oman Kuputsa Nhau • Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Pakistan Breaking News • Qatar Kuputsa Nhau • Kutarisirwa • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Solomon Islands Breaking Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Uganda Breaking News • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
Iyo Gulf nharaunda inogona kuve inotungamira mukufamba kwekushanya uye kushanya, asi iine yakashata mhepo mhando pasirese. Sechikamu chePasi reZuva mushandirapamwe wemaguta akasvibirira, Eco2Greetings inoda kuti nyika itore nzira dzakadai sekujoinha shanduko yezuva, kusarudza zvivakwa zvakasvibira zvine chekuita nesimba rinowedzerwazve, uye kusarudza dzimwe nzira dzekutakura sebhasikoro kana bhazi kuenda kubatsira kuderedza kusvibiswa kunokuvadza.
Maguta ane chepfu kazhinji idambudziko rakagadzirwa nevanhu. Imwe chete sosi hombe ye zvinosvibisa mweya kupisa kwemafuta zvakaita semarasha nepeturu. Mafuta emafuta anoshandiswa kupisa, kushandisa mota dzekufambisa, mukugadzira magetsi, uye mukugadzira uye zvimwe zviitiko zveindasitiri. Kupisa aya mafuta kunokonzera utsi, acid mvura uye girinihausi gasi inobuda.
Middle-Eastern nyika dzakapfuma mafuta dzinotonga nzvimbo gumi dzepamusoro pane rakanyanya kusvibiswa runyorwa rwemaguta. Maguta akadaro ari mu:
Saudi Arabia, chidimbu chematambudziko e108.
Qatar, chidimbu chematambudziko e103.
Ejipitori, chinhu chemhando yezvinhu makumi mapfumbamwe nematatu.
Bhangiradheshi, nyaya yezvidimbu chikamu che84.
Kuwait, chidimbu chenyaya chikamu che75.
Cameroon, chikamu chematanho e65.
Mauritania particle nyaya nhanho yemakumi matanhatu neshanu.
Nepal, chikamu chematanho emakumi matanhatu nenhanhatu.
United Arab Emirates, chikamu chematanho e64.
India, chinhu chemhando yezvinhu makumi matanhatu nematanhatu.
Libya, chikamu chematanho e61.
Bahrain, chinhu chemhando yezvikamu makumi matanhatu.
Pakistan, chinhu chemhando yezvikamu makumi matanhatu.
Niger, chinhu chemhando yezvinhu makumi mashanu nemapfumbamwe.
Uganda, nyaya yezvikamu zve57.
China, chinhu chemhando yezvinhu chikamu che54.
Myanmar, chinhu chemukati chikamu che51.
Iraq, chinhu chemhando yezvikamu makumi mashanu.
Bhutan, chinhu chemhando yezvinhu chikamu che48.
Oman, chinhu chemhando yezvinhu makumi mana nemasere.
United Kingdom yakaiswa pamakumi mashanu neshanu pachiratidziro chine chikamu chemazana gumi nemaviri. USA yakapihwa nzvimbo yechi159, ine chikamu chepasi chakanakisa chegumi nesere.
The inoshanda mepu zvinoratidzawo kuti nyika dzakaita seChina, dzine mukurumbira wekushayikwa kwemweya wakachena mukati memaguta avo, dzakasvibisa nhanho dzemhepo dziri HALF yehuwandu hweSaudi Arabia. China yakarova zvibodzwa makumi mashanu neshanu zvichienzaniswa neyaSaudi Arabia inokatyamadza yakaita zvikamu gumi neshanu (54). Saudi Arabia ndiyo inonyanya kukonzeresa mumatanda akasvibiswa kwazvo eguta.
Iwo mukana wekuvandudza zvirwere zvemwoyo, gomarara uye sitiroko zvinowedzerwa munzvimbo dzakasviba zvakanyanya uye ongororo inoratidza kuti kufa kwevana kwakakwira munyika dzakanyanya kusvibiswa nemhepo. Zvinoenderana ne World Health Organization (WHO), kusvibiswa kwemhepo ikozvino kuri kutyisidzira hutano kupfuura Ebola kana HIV uye 80% yenzvimbo dzese dzemadhorobha dzine kusvibiswa kwemweya pamusoro peheti kunoonekwa sehutano.
Haisi yose kusuwa uye kusuwa, imwe yemhepo yakachena kwazvo pasi ndeyaNew Zealand, Solomon Islands, Kiribati neBrunei Darussalam, avo vese vanozvirumbidza nhanho inoyevedza yezvinhu zve5.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve epasirose Inotyisa Maguta, iwe unogona kushanyira: www.neworleanshots.com.